SeedShares စျေး - အွန်လိုင်း SEEDS ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို SeedShares (SEEDS)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ SeedShares (SEEDS) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ SeedShares ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ SeedShares တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
SeedShares များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
SeedSharesSEEDS သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.00459SeedSharesSEEDS သို့ ယူရိုEUR€0.00389SeedSharesSEEDS သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.00351SeedSharesSEEDS သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.00418SeedSharesSEEDS သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.0409SeedSharesSEEDS သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.029SeedSharesSEEDS သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.102SeedSharesSEEDS သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.0171SeedSharesSEEDS သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.00608SeedSharesSEEDS သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.00642SeedSharesSEEDS သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.102SeedSharesSEEDS သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.0356SeedSharesSEEDS သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.0246SeedSharesSEEDS သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.344SeedSharesSEEDS သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.0.775SeedSharesSEEDS သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.0063SeedSharesSEEDS သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.00702SeedSharesSEEDS သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.143SeedSharesSEEDS သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.0319SeedSharesSEEDS သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.49SeedSharesSEEDS သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩5.44SeedSharesSEEDS သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦1.78SeedSharesSEEDS သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.336SeedSharesSEEDS သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.126
SeedSharesSEEDS သို့ BitcoinBTC0.0000004 SeedSharesSEEDS သို့ EthereumETH0.00001 SeedSharesSEEDS သို့ LitecoinLTC0.00008 SeedSharesSEEDS သို့ DigitalCashDASH0.00005 SeedSharesSEEDS သို့ MoneroXMR0.00005 SeedSharesSEEDS သို့ NxtNXT0.358 SeedSharesSEEDS သို့ Ethereum ClassicETC0.000677 SeedSharesSEEDS သို့ DogecoinDOGE1.32 SeedSharesSEEDS သို့ ZCashZEC0.00006 SeedSharesSEEDS သို့ BitsharesBTS0.141 SeedSharesSEEDS သို့ DigiByteDGB0.147 SeedSharesSEEDS သို့ RippleXRP0.0163 SeedSharesSEEDS သို့ BitcoinDarkBTCD0.000158 SeedSharesSEEDS သို့ PeerCoinPPC0.0152 SeedSharesSEEDS သို့ CraigsCoinCRAIG2.09 SeedSharesSEEDS သို့ BitstakeXBS0.196 SeedSharesSEEDS သို့ PayCoinXPY0.0802 SeedSharesSEEDS သို့ ProsperCoinPRC0.576 SeedSharesSEEDS သို့ YbCoinYBC0.000002 SeedSharesSEEDS သို့ DarkKushDANK1.47 SeedSharesSEEDS သို့ GiveCoinGIVE9.94 SeedSharesSEEDS သို့ KoboCoinKOBO1.05 SeedSharesSEEDS သို့ DarkTokenDT0.00423 SeedSharesSEEDS သို့ CETUS CoinCETI13.26